I-Dubai enye yemizi ebaluleke kunazo zonke namuhla - Ukuvakashela ehlane
I-Dubai enye yemizi ephawulekayo namuhla
Dubai nokuphepha komgwaqo?
Kwangathi 9, 2019
Imiqondo yebhizinisi ye-14 Best Small Scale yokusetha ibhizinisi lakho e-Dubai
Kwangathi 11, 2019
I-Dubai enye yemizi ebaluleke kunazo zonke namuhla!
IDubai - elinye lamadolobha abaluleke kakhulu kulezi zinsuku. Kuyinhlanganisela phakathi imvelo yesimanje, yekusasa nelinobuhlakani kanye nokwehlukahlukana kwabantu. Kuyamangaza ukubona amasiko amaningi ahlukahlukene endaweni eyodwa futhi zazi isiko lama-Arabhu ngesikhathi esifanayo. Kunezindawo eziningi kakhulu edolobheni zokuhlola nokuzijabulisa.
Into yokuqala oyibonayo lapho ufika eDubai isikhumulo sezindiza emhlabeni wonke saseDubai. Enye yezindiza ezinkulu futhi ezinhle kakhulu emhlabeni. Ithiphu eyodwa engingakunika yona ukuthi ubhukhe insizakalo kaMarhaba ngaphambi kokufika. Le nsizakalo iyasiza futhi ibaluleke kakhulu kulesi sikhumulo sezindiza esimatasa. Kuzokusindisa isikhathi futhi kugweme ukudideka ongaba nakho lapho ufika.
Umsizi wezindiza uzokulinda esangweni lapho ufika futhi unakekele yonke imisebenzi yesikhumulo sezindiza. Udinga nje ukunikeza ipasipoti yakho kumenzeli futhi yena uzokunakekela konke, ngenkathi unaso isikhathi sokubheka futhi “ukubona” isikhumulo sezindiza.
Njengoba amabanga kukhona amakhulu impela, uzonikezwa imoto yokugibela, ezokudlulisela esangweni lokufika kwi-ELEVATOR edumile, ekuyisa endaweni yangokwezifiso nezimpahla. Lesi siphakamiso sinjalo okumangalisayo okushiya umuzwa we-WOW, ngenkathi ngihamba kuyo ngoba inkulu kakhulu ukuthi ingathatha abantu be-60 futhi futhi kukhona nethambo lamanzi elihle ngemuva kwayo ukuze liyibuke ngenkathi ihamba ngayo.
Imvamisa, umugqa emasikweni winde, ngoba okokuqala udinga ukuhlolwa ngamehlo bese kuthi emva kwaleyo isheke lepasipoti. Ngezinsizakalo zeMarhaba, ungaphunyuka kulayini, ngoba ubaluleke kakhulu kumkhakha okhethwe ngokukhethekile futhi wedlula ngokushesha kunabanye. Futhi endaweni yezimangalo zemithwalo, kuzoba ne-ejenti enama-trolley, ezonakekela umthwalo wakho, uyidlulisele yona ophuma nayo, futhi uze uyifakele nemoto, ngaphandle kokuthi uzikhathaze. Le nsizakalo ifaka i-visa ekhishwa lapho ufika kanye nendawo yokuphumula ekhethekile lapho ungaphumula khona ngaphambi kokuhamba usendleleni ebuyela emuva. Ngakho-ke lelo yiphuzu elihle ube nomqondo lapho uvakashela eDubai ikakhulukazi uma kungokokuqala.
Namuhla sizoyithola leli dolobha futhi sizoveza imvelo yayo
Enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu yiDubai Marina. Indawo igcwele izindawo zokudlela ezinhle nemigoqo enokubukwa okuhle kwehhotela elihle iBurj Al Arab. Ungazizwa imvelo exotic Arab uzama ejwayelekile Arabic isidlo ngenkathi unama-shisha -divayisi yendawo yokubhema enezinhlobonhlobo ezihlukile.
Umsebenzi wokuqala omnandi akufanele uphuthelwe ukuvakashela i-Desert. Uma ngabe awukaze uye ehlane ngabe awukaze uye eDubai.
Uhambo lwasogwadule lubandakanya imisebenzi enjengale: I-Dune Bashing ngemoto ebambekayo esihlabathini. Ukugibela ikamela, ukudla isidlo sakusihlwa, ukuhlala ekhaphethini ekhethekile phansi esihlabathini ngenkathi ubuka imidanso ejwayelekile yesisu sama-Arabhu - umbukiso omangalisayo lapho ubona khona eDubai kuphela. Omunye wemidanso eyingozi futhi emuhle ngowesifazane odansa onenkemba ezandleni zakhe, ngaphansi kwesigqi somculo wasempumalanga. Uyadlala futhi udansa nalo ngokushelela njengento yokudlala, kepha ngasikhathi sinye ukugcina umbukeli enesizungu esikhulu futhi abashiye benomuzwa wokuthi usemishini yesikhathi idluliselwe kulezo zangoma zomlingo zama-Arabhu.
Idlala futhi idansa nayo ngokushelela okufana nethoyi, kepha ngasikhathi sinye kugcina umbukeli ethukile kakhulu futhi ubashiye bezizwa sengathi kungumshini wesikhathi odluliselwe kulezo zingilazi zama-Arabhu zomlingo.
Omunye umsebenzi iHenna Paintings- imidwebo emihle ejwayele ukwenziwa ezandleni nasezandleni. Kubukeka njenge tattoo kepha ngombala onsundu, okuhlala isikhathi esingangeviki noma amabili, kuya ngokuthi uliphatha kanjani nokuthi livame kangakanani ukuvezwa ngamanzi. Imvamisa abesifazane bendawo bayigqoka njengomhlobiso kungezwe ezingubeni zabo zikazwelonke.
Kukhona izitolo eziningi kanye nama-bazaara ogwadule, lapho ungathenga khona izikhumbuzo nezinto zokugqoka ezigqokwa ngabadansi- yizingubo ezimbili ezigqokwa ngemibala ehlukene eklanyelwe amaphenti amancane wombala wegolide kuwo, okudala lowo msindo ngenkathi udansa- isitayela esivamile sasemuva. Lokho kungahlala kube yinkumbulo ekhabethe lakho. Ugwadule lwentaba yinto engalibaleki okuyinto okumelwe uyenze uma uvakashela i-Dubai Ungabhuka kalula le-adventure nenye yezinkampani zasendaweni i-Desert safari Dubai http://www.desertsafaridubai.com/ lapho ungathola khona izinhlinzeko ezingcono kakhulu zamanani nezinhlanganisela ezahlukene zamaphakheji.
Isakhiwo esikhulu kunazo zonke emhlabeni Burj Khalifa
Indawo elandelayo yokubona okuphoqelekile empeleni, isakhiwo eside kunazo zonke emhlabeni uBurj Khalifa. Umthombo oseduze kwawo namanzi amahle okudansa ngaphansi komsindo wezitayela zomculo ezihlukile nemiphumela yokukhanya. Kukhona izindawo zokudlela eziningi, izitolo nemigoqo kule ndawo lapho ungahlola khona.
Izitolo zokuthenga, zikhona eziningi, kodwa ezithandwa kakhulu yiyona Dubai Mall neMall of the Emirates. EMall of the Emirates, ungabona indawo ye-ski lapho kusuka kusimo sezulu esishisayo ngaphandle lapho ungathola khona ukushushuluza ezitolo ezinkulu.
I-Dubai mall ine-aquarium enkulu kakhulu lapho ungabona khona oshaka nezinye izidalwa zasolwandle ezahlukene.
Ukuthenga nakho kungajabulisa kancane. Ngaphandle kwazo zonke izitolo nezindawo ezinkulu ezitolo ezinkulu, kunezinye izindawo ezifihliwe lapho ungathenga ngandlela thile okuhlukile futhi okungekhona okokugcina. Yebo, sonke siyasazi isigameko esikuyi-movie yesibili ethi Sex kanye nedolobha, lapho amantombazane aya khona ezitolo ezifihliwe ukuyothenga izikhwama zemikhiqizo engamanga. Unembile - ngikhuluma ngezitolo ezifihliwe. Lezi yizindawo lapho ungeke ubone khona impela ngoba zakhiwe ezakhiweni zokuziphilisa.
Uma uhlangana nomthengisi emgwaqweni okumema ukuthi ubuke esitolo esifihliwe, ungesabi uhambe uyokwazi ukubona le ndlela ethokozisayo yokuthenga. Futhi khumbula ukuxoxisana!. Abathengisi bathanda ukugoba, ngakho-ke kufanele ube namakhono amahle kakhulu okubamba ngenye indlela ungahle usebenzise imali ehlekisayo kwimikhiqizo engelona iqiniso.
Sonke siyazi ubukhazikhazi, ezintsha futhi shiny Dubai. Kodwa ngisho nobusha bezwe, leli lizwe linomlando futhi. Ungathatha kancane bese uhlola idolobha elidala laseDubai. Ukuya lapho kufanele uthathe isikebhe futhi uwele umfula ngama-1 noma ama-2 dirhams kuphela. Lesi yisipiliyoni esihle kakhulu ngoba lezi zikebhe zincane kakhulu futhi zimfushane kangangokuba umuzwa wokuhamba kuwo ufana nokuthi usuzowela emanzini nganoma yisiphi isikhathi.
Izikebhe zingathatha i-4 noma i-5people futhi imvamisa kunomuntu oyedwa ohamba ngesikebhe. Uma ufika kolunye uhlangothi ufaka umhlaba oyimilingo ophule ngokuphelele - isikhumbuzo sakudala saseDubai. Imigwaqo emincane igcwele ngemigwaqo. Ukwehlukahlukana okukhulu kanye nobuningi bezinongo owake wazibona empilweni yakho. Amasaka amakhulu agcwele izinongo ezimibalabala kangako, ezinye zazo azijwayelekile futhi ziyamangaza. Futhi iphunga nephunga lasemoyeni ongalizwa kubo limnandi kakhulu futhi alilingani ezobanjwa engqondweni yakho kuze kube phakade. Le enye indawo ethatha “amasela ka-Ali Baba no-40” Fairytale.
Dubai City - Isiphetho
Yilapho ukuphela kwethu okuhle kuphele khona, kepha lo muzi ucashe ezinye izindawo eziningi okumangazayo kakhulu nemicimbi ongayihlola. IDubai ingenye ejabulisa kakhulu futhi amadolobha avumelekile emhlabeni, okudingeka uwavakashele.
IDubai City Company manje ihlinzeka izinkombandlela ezinhle ze-Life eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho, ngalokhu engqondweni, manje ungathola iziqondiso, amathiphu kanye nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.
I-Turkey Iyakhula e-Dubai
Thola umsebenzi njenge-expat evela eThailand
Imisebenzi e Dubai ngezikhulumi zasePoland
I-Portugal Speakers Guide e Dubai
Imisebenzi e Dubai ngezikhulumi zesiGreki
Amafutha asePhilippines e-Dubai
Umhlahlandlela wolimi lwesiFulentshi wezidingo
Izisebenzi zokukhuluma zesiCroatia e Dubai
Imisebenzi e Dubai ngeRussia e Dubai
Thola umsebenzi e-Dubai kusuka eSpain
Ama-Indian expats e-Dubai